“Waxaan daawaday goolkii aan ka dhaliyay Real Madrid in ka badan 100 jeer” – Melcom – Gool FM
“Waxaan daawaday goolkii aan ka dhaliyay Real Madrid in ka badan 100 jeer” – Melcom
(Barcelona) 09 Feb 2019. Laacibka da’ada yar reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Melcom ayaa muujiyay sida weyn uu ugu faraxsan yahay goolkii uu ka dhaliyay kulanka Arbacadii lasoo dhaafay ay ku wada ciyaareen Real Madrid lugta koowaad wareega 4-ta ee Copa del Rey garoonka Cump Nou.
Kulankii lasoo dhaafay ee El Clasico-da ayaa wuxuu ku soo idlaaday barbaro 1-1 ah, kaasoo lagu go’aamin doono lugta labaad ee lagu ciyaari doono garoonka Santiago Bernabeu dhamaadka bishan cida u gudbi doonto finalka tartankan.
Melcom ayaa kulankii lasoo dhaafay sameeyay bandhig cajiib ah ee soo jiitay jamaahiirta ku sugneyd garoonka Cump Nou, wuxuuna kooxdiisa Barcelona ka bad baadiyay guuldaro kasoo gaari lahayd Real Madrid, kadib markii uu dhaliyay goolkii barbaraha.
Hadaba da’ada yar reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Melcom oo ka hadlayay goolkan ayaa wuxuu yiri:
“Waxay ahayd daqiiqad fantastik ah”.
“Waxaan daawaday goolkii aan ka dhaliyay Real Madrid in ka badan 100 jeer”.
SAWIRRO LA HELAY: Diyaaradii la dhacday Sala oo laga soo saaray Gunta hoose ee Badda